၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လူသစ်စုဆောင်းမှုကိုဆက်လက်ပုံဖော်မည့်လမ်းကြောင်းသစ် ၇ ခု - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B7B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 8, 2021 မေလ 6, 2021 အမေလီယာအမ်မာ အာရအလွတ်, B2B, စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလွတ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, တရုတ်အလွတ်, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက်, Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, ပြင်သစ်အလွတ်တန်း Gigs, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, ဟိန်ဒီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, အင်ဒိုနီးရှားအလွတ်တန်း Gigs, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, ပေါ်တူဂီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, ရုရှားအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, စပိန်အလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, နည်းပညာ, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
AI tools များသည်ယခုအခါကမ္ဘာအနှံ့ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်အနက်ဖွင့်နေကြသည်။
အမှုအရာအနည်းငယ်ရန်လိုပုံရသည်နေစဉ်, အားလုံးဆုံးရှုံးသွားသည်မဟုတ်။ သင်၏အလုပ်သမားအခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်နှင့်အပြောင်းအလဲများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရန် ၂၀၂၁ တွင်အထင်ရှားဆုံးစုဆောင်းမှုပုံစံနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ဆက်လက်စုဆောင်းမှုကိုဆက်လက်ပုံဖော်မည့်လမ်းကြောင်း (၇) ခုကိုဖော်ပြပါမည်။
၁။ အလိုအလျောက်ငှားရမ်းခြင်းအတွက် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုခြင်း
Artificial Intelligence ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးသို့ပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းနှင့်ရယူသုံးစွဲခြင်းတို့သည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ စုဆောင်းမှုများအတွက်အတူတူပင်; ကူးစက်ရောဂါသည်အလိုအလျောက်ဆီသို့စုဆောင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ငှားရမ်းမှု၏အလိုအလျောက်အဓိကအားပေါ်တွင်မူတည်သည် စက်သင်ယူမှု နှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ AI ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ငှားရမ်းရာတွင်လူ့ဘက်လိုက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။ လူသားများနှင့်မတူဘဲစက်များကိုယုံကြည်ချက်များ၊
COVID ခေတ်လွန်စီးပွားရေးသည်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ slot ပမာဏနည်းပါးသောကြောင့်လူအများအပြားယှဉ်ပြိုင်ကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လျှောက်ထားသူရေကန်မှအကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုစကားဝိုင်းမှပရိုဖိုင်းစစ်ဆေးခြင်းသို့ AI tools များသည်ယခုအခါကမ္ဘာအနှံ့ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေသည်။ ယခု Chatbots သည်ပုံမှန်မေးခွန်းများအတွက်သူတို့၏အဖြေများမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ၏စရိုက်လက္ခဏာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်စက်သင်ယူမှုကိုလည်းသြဇာပြုလျက်ရှိ၏ AI အနေဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုအဆင့် သတ်မှတ်၍ အချိန်သက်သာစေသည်။
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာခြင်းနှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားအင်အားသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်ယနေ့နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာချိတ်ဆက်နေသည်။ အဖွဲ့အစည်းအများစုသည်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများအားလုံးကိုရုံးမှအလုပ်လုပ်ရန်မလိုအပ်သောအချက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိကြသည်။ စုဆောင်းမှုများအတွက်အတူတူပင်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများသည်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါ၊ စုဆောင်းသူများသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် virtual tools များကိုကပ်ထားသည်။ လျှောက်ထားသူများ၏တည်နေရာအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်နောက်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိတော့ပါ။ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုငှားရမ်းသည်။
၃. ဒီဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်မှုအတွက် ဦး စားပေးမှု
LinkedIn News အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအင်ဒရူး Seaman ၏အဆိုအရလာမည့် ၅ နှစ်အတွင်းတွင်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည် အလုပ်သစ် ၁၅၀ ထပ်မံ နည်းပညာကဏ္ sector ၌တည်၏။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလုံးဝမရှိသောကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်မှုသည်တစ်နာရီ၏လိုအပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ လျှောက်ထားသူနီးပါးအင်တာဗျူးတက်ရောက်နိုင်ပါသလား? အကယ်၍ သူတို့ကစမ်းသပ်မှုကိုကြေငြာမယ်ဆိုရင်အိမ်မှလုပ်စရာမလိုဘဲအလုပ်လုပ်ရန်သင့်တော်သောအဆောက်အ ဦ များရှိပါသလား။ သူတို့၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုသည်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကိုင်တွယ်ရန်အမြန်နှုန်းရှိပါသလား။ ဤမေးခွန်းများသည်လျှောက်ထားသူများနှင့်ပါလာသည့်ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်ညီသည်။
ပျော့ပျောင်းသောကျွမ်းကျင်မှုသည်အလုပ်သမားစျေးကွက်ရှိကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်အများစုကိုဖြစ်စေသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောတောင်းဆိုမှုများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူအလုပ်ရှင်များသည်စိန်ခေါ်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာများရှိမရှိသိရန်လိုအပ်သည်။ အလုပ်ဈေးကွက်တွင်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး soft ကျွမ်းကျင်မှုများထဲမှအချို့မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည်၊ ပြ-နာဖြေရှင်းရေးစွမ်းရည်နှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးစွမ်းရည်များဖြစ်သည်။ ကူးစက်ရောဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အလုပ်ရှင်များသည်ယခုအခါထိုအရည်အချင်းများကိုအလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လျှောက်ထားနိုင်သောလျှောက်ထားသူများကိုရှာဖွေနေသည်။
Virtual ငှားရမ်းခြင်းကိရိယာများသည်စုဆောင်းသူများသည်လူမှုရေးအရဝေးကွာသောပရိုတိုကောများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီသည်။ စွမ်းရည်ရှာဖွေခြင်းမှမှန်ကန်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရွေးချယ်ခြင်းအထိဤကိရိယာများသည်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
Psychometric စစ်ဆေးမှုများကိုယခုလူတစ် ဦး သည်အလုပ်ခန့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်းကိုမည်သို့မည်ပုံကိုင်တွယ်မည်ကိုနားလည်ရန်အတွက်စုဆောင်းရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစာနာနားလည်မှုရှိစေရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်ကူညီပေးသည်။
လျှောက်ထားသူများကိုခြေရာခံသည့်စနစ်များ၊ စိစစ်ရေးစက်များနှင့် cloud-based ဆက်သွယ်ရေး application များသည်သာမန် virtual ငှားရမ်းခြင်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းမရှိသော၊ ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံများကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ၄ ​​င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
၆။ လူမှုမီဒီယာကို ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း
55 ရာခိုင်နှုန်းကို အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏ပြောကြားချက်အရဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အလုပ်ရှာဖွေရာတွင်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ 84 ရာခိုင်နှုန်းကို စုဆောင်းသူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာလက်ကိုင်များကိုငှားရမ်းရန်အသုံးပြုသည်။ အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများက Facebook, Twitter, Instagram, နှင့် LinkedIn ကဲ့သို့ကျော်ကြားသောလူမှုကွန်ယက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုဖွင့်ရန်ဖွင့်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ရာထူးများ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူ, ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်များအသုံးဝင်သောနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ဝန်ကိုထမ်းရွက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုပြီးထိတွေ့မှုရရန် hashtags နှင့်ကြော်ငြာများကိုအသုံးပြုသည်။ LinkedIn သည်လူသိအများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းစုဆောင်းသူများသည်စွမ်းရည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
7. Talent ရေကန်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသောကြောင့်အဖွဲ့အစည်းများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုရယူရန်မဟာဗျူဟာများကိုပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ Ardent Partners မှပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုကပြောကြားသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဦး စားပေးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောရေကူးကန်ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောရေကူးကန်သည်ထိပ်ဆုံးအလုပ်လျှောက်ထားသူများ၊ ရင်းမြစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရည်ညွှန်းထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရေကူးကန်ထဲ၌ပါ ၀ င်ရန်ဆန္ဒအလျောက်ပါ ၀ င်သူများစာရင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည့်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကပင်အခွက်တဆယ်ခတ်သည်များရှိသော်ငြားသူတို့သည် COVID အလုပ်အကိုင်ဈေးကွက်တွင်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိကြသည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်အပေါ်မှီခိုသကဲ့သို့ပြင်ပမှလုပ်သားအင်အားအပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။ ၂၀၂၁ တွင်ကုမ္ပဏီများသည်ငှားရမ်းခများအလွယ်တကူဖြစ်စေရန်နှင့်လုပ်သားအင်အားနှင့်ပါ ၀ င်လိုသောအရည်အချင်းများနှင့်ထိတွေ့ရန်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောရေကန်များကိုအသုံးပြုမည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အလုပ်ရှာဖွေခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်နေပုံရသော်လည်းအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမှာတုပ်ကွေးရောဂါသည်သင့်အားပိုမိုတောက်ပသောအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ အရေအတွက်ကနေအရည်အသွေးမှတစ် ဦး ဖှယျပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်; ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်သူတို့၏ ၉ ရက်မှ ၅ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှလွတ်မြောက်လာပြီဟုခံစားနေကြရပြီး၊ သူတို့လုပ်ထားသည့်နာရီများထက်အလုပ်များကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီနေထိုင်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းကသင့်အားလက်ရှိအလုပ်သမားစျေးကွက်၏ဒိုင်းနမစ်ကိုလက်ခံရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဉာဏ်ရည်တု အများပိုင်သတင်း မင်္ဂလာပါ စက်သင်ယူမှု လူမှုမီဒီယာ လူမှုမီဒီယာ Softskills ခေတ်ရေစီးကြောင်း
Amelia Emma သည် GreyCampus ရှိ Content Manager ဖြစ်သည်